Yintoni uVavanyo loNgcoliseko loMbuso | XperimentalHamid
Yintoni uvavanyo lokuhlanzeka kukaRhulumente
Julayi 7, 2020 Julayi 6, 2020 by Qasim Khan
Sinyulu ngexesha lokuzalwa kwaye njengoko sikhula kwaye sinamava ehlabathi ekuziqheliseni zininzi izinto ezenzekayo kuthi. Okanye sizifumana singena. Uvavanyo lobunyulu beLizwe yenye yeemvavanyo zovavanyo zokucoceka ngokubanzi okuya kukuxelela ukuba umsulwa okanye unesono kangakanani.
Ungalwenza njani na uvavanyo
Ukuba uyalwazi uvavanyo lwe-Rice Purity, okanye uvavanyo lwe-Rice Thresher Purity Test, olu luhlobo oluhlengahlengisiweyo okanye oluhlaziyiweyo lolu vavanyo.
Kwimeko apho uzibuza ukuba zintoni kwaye zithetha ntoni ngobunyulu. Ufika endaweni elungileyo. Siza kukuxelela ngayo yonke le nto ngokweenkcukacha kwaye uphendule umbuzo wakho wokuba yintoni uvavanyo lwenqanaba lokuhlambuluka.
Uvavanyo lobunyulu luvavanyo lokuzibeka olwenziwe ngumntu. Oku kuhlola inqanaba lomthathi-nxaxheba lokungabi natyala kwimiba efana neSini, iziyobisi, ubuqhophololo, ubudlelwane, kunye neminye imisebenzi enjalo ethathwa njengesono kuluntu ngokubanzi.
Ubukhulu becala inomyinge wepesenti ne-100% ebonisa ezona nyulu kunye namabakala asezantsi aphezulu inqanaba lokungcola.
Iinguqulelo ezahlukeneyo zolu vavanyo zihleli kwi-intanethi ixesha elide ngamagama neenkcazo ezahlukeneyo. Uvavanyo lweSizwe lokuCocwa kohlobo olunye olo. Ikwabizwa ngokuba luvavanyo lokucoca ubunyulu nguyen 1011 okanye isiuyen1011 uvavanyo lokuhlambuluka. Ukuba uyazibuza ukuba kutheni le nto funda phambili.
Impendulo yeli gama linikezelwa emva kwegama lomntu uSen Neguyen ophethe i-twitter ye @ sennguyen1011 kwaye ungumphuhlisi wovavanyo.
Uvavanyo luguqulwe ngohlobo lwenguyen1011 Uvavanyo lokucoceka. Oku ngokokuhlakulela ubunyulu bokungafaniyo nenguyen1011 yinguqulelo yakhe yovavanyo lokuhlambuluka kweRice. Ukulungiswa kunye nezinto ezininzi zibandakanyiwe
Olona tshintsho luphambili kolu hlobo lutsha kukuba imibuzo ebuzwayo inikwa ubunzima kwaye ikunika amanqaku okucoceka okulinganayo. Oku ngokombhali kufuneka kukunike inkcazo engcono yokuba unyulu kangakanani.
Olu vavanyo luquka imibuzo eli-100 ngokubhekisele kuzo zonke izinto onokuthi ungazenzanga kubomi bakho ukuza kuthi ga ngoku. Kukunika amanqaku ahlanganisiweyo ayo yonke imibuzo oyiphendulileyo, kunye nenqaku lokucoceka kweklasikhi ngokusekwe kwinani lemibuzo ephendulweyo. Ke ekugqibeleni, xa ungenisa iziphumo, kuya kubonakaliswa inqanaba lokucoceka kobunzima.
Insiza yasimahla. Ungajonga amanqaku okucoceka kwakho ngokuzalisa uvavanyo lokucoceka kwelizwe nguyen 1011. Ungayibulela ukucoceka kwenguyen1011 emva kwexesha ngokukunceda ukuba uzihlole. Ikhonkco lingene ngaphakathi kweli nqaku.
Ukuba ubuza umbuzo onokuthi uthatha njani uvavanyo lokungcola lweLizwe okanye ukuba ungaluthatha phi uvavanyo lokungcola ngoMbuso. Siza kukukhokela ngayo.
Ukuba unomdla wokufumana indlela yobomi beengelosi okanye obobuSathana oye wabuchitha ukuza kuthi ga ngoku, unokujonga oku ngokuthabatha inxaxheba kokulula ukuthatha, ukutyhila, uvavanyo ngoku.
Cofa nje kwikhonkco elingezantsi ukuya ngqo kwiphepha lovavanyo olwenziwe ngu Sen. Jonga amanqaku akho Uvavanyo lokucoceka kwelizwe Indawo kwaye wabelane ngayo nabahlobo bakho.
iindidi umphezulu tags Uluthatha njani uVavanyo loKhuseleko lweLizwe, Senguyen1011 Ukucoceka, Uvavanyo lokucoceka kwelizwe, Uvavanyo lweSizwe lokuCoceka Nguyen 1011, Amanqaku ovavanyo oluCocekileyo, Uza kuthatha phi kuvavanyo lokungcola kweLizwe Post yokukhangela
Umngeni opinki wePink
I-Amazon Quiz i-7 kaJulayi